Le ndlu ikwinduli entle ejonge intaba yaseCetona kunye nentlambo. Inegadi yabucala evula imbonakalo yechibi (ekwabelwana ngayo namanye amagumbi ama-4) kunye nepaki ejikelezwe yi-laurel grove kunye neminye imithi emidala yehlabathi. Ngaphakathi kukho ikhitshi, igumbi lokuhlala elihle elinemiqadi eveziweyo, iindonga zelitye eliqhelekileyo laseTuscan kunye nendawo yomlilo enkulu. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi kunye negumbi lokuhlambela elibuyiselwe ngo-2020 ngeshawa enkulu. Wifi yasimahla
Uphawu oluphambili lwendlu kukuba ibekwe kwinduli yepanoramic kakhulu apho unokuthatha uhambo ngendalo kwaye uxabise imibala emihle yelizwe laseTuscan.
Nangona singahlali kufutshane nendlu, ndiya kufumaneka ngalo naliphi na ixesha lokuhlala kuzo naziphi na izicelo ezivela kwiindwendwe kwaye ngokuqinisekileyo ekufikeni ndiya kunika iinombolo zam zefowuni ukuze ziqhagamshelane nam.